Rangoon voter boycotts the election because he mistrusts the USDP and that money and food was offered for votes at the polling station / ကြံ့ဖွံ့ဆိုတာ စစ်အစိုးရနဲ့အတူတူပဲ။ ကျနော်က သူတို့ကို အယုံအကြည်မရှိပါဘူ | Burma Election Tracker
Rangoon voter boycotts the election because he mistrusts the USDP and that money and food was offered for votes at the polling station / ကြံ့ဖွံ့ဆိုတာ စစ်အစိုးရနဲ့အတူတူပဲ။ ကျနော်က သူတို့ကို အယုံအကြည်မရှိပါဘူ Posted in boycott
A voter from Rangoon Division who spoke to Burma Election Tracker said: "I heard that the election will be held on November 7th, 2010 and that the authorities made National Registration Cards for free before election. I didn't go back home and there's no difference if I'm at home or not. I want to abstain. They will do whatever they want to do if I vote. When I say 'they', I mean the USDP. I didn't hear about the security conditions of our village and of any threat on our family. There were many members of the USDP in our village. In [the referendum in] 2008, the authorities threatened us and said we would be arrested if we didn't vote. I had contact with my home at the election day. My mother told me that there were meals at the polling station and money was being offered for votes. The USDP is the military regime and I mistrust them and their election. I'm not interested this election. My mother told me that the polling station was opened at 9:00 am and closed at 5:00 pm."
၇၊၁၁၊၂၀၁၀ ရက်နေ့တွင် ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်လို့ကြားပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင် ရွာမှာ မှတ်ပုံတင် အလကားလုပ်ပေးတယ်လို့ ကြားမိပါတယ်။ ကျနော်က အိမ်မပြန်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ပြန်လည်း မထူးပါဘူး။ ဘယ်သူကိုမှ မဲမပေးခင်ဘူး။ မဲပေးလည်း သူတို့လုပ်ချင်ရာ လုပ်မှာပဲ။ သူတို့ဆိုတာ ကြံ့ဖွံ့နဲ့တစညကို ပြောတာပါ။ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် ရွာလုံခြုံရေးအခြေအနေမကြားမိပါဘူး။ ကျနော်ရဲ့မိသားစုအပေါ် ခြိမ်းခြောက်မှု ဘာမှာမကြားမိပါဘူး။ ရွာမှာတော့ ကြံ့ဖွံ့အသင်းဝင်တွေရှိတယ်။ ၂၀၀၈ တုန်းကတော့ မဖြစ်မနေမဲပေးရမယ်။ မဲမပေးရင် ကိုယ့်အပြစ်နဲ့ ကိုယ့်ခံရမယ်လို့ ပြောတာမျိုးရှိခဲ့တယ်။ ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာ အိမ်နဲ့အဆက်အသွယ်ရတယ်။ မဲရုံမှာ အကျွေးအမွေးတွေရှိတယ်။ ငွေးပေးတာတွေ ရှိတယ်လို့ ကျနော်အမေက ပြောပြီး ကြားသိရတယ်။ ကြံ့ဖွံ့ဆိုတာ စစ်အစိုးရနဲ့အတူတူပဲ။ ကျနော်က သူတို့ကို အယုံအကြည်မရှိပါဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲနှင့်ပတ်သက်တော့ အယုံအကြည်မရှိဘူး။ စိတ်လည်းမ၀င်စားဘူး။ မဲရုံးက မနက် ၉ နာရီဖွင့်တယ်။ ညနေ ၅ နာရီပိတ်သွားတယ်လို့ ကျနော်အမေးပြောပြီး သိရပါတယ်။